🥇 ▷ Samsung Galaxy M90 ayaa imanaya sidoo kalena taleefanka gacantu cusub ✅
Samsung Galaxy M90 ayaa imanaya sidoo kalena taleefanka gacantu cusub
Samsung waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah taleefannada dhexe oo leh qeexitaanno aad u xiiso badan, sida Samsung Samsung Galaxy A Series 2019. Hadda liig ayaa noo xaqiijineysa in Samsung ay diyaariso Samsung Galaxy M90, oo ah kuwa ugu awoodda badan qoyskiisa. Dhowr bilood ka hor waxaan la kulannay Samsung Galaxy M40 bartamihii dhexe waxaanan diiradda saarnay dhalinyarada leh naqshad casri ah. Hadda moodooyin cusub ayaa imaan lahaa.
Samsung ayaa soo bandhigtay Samsung sannadkan Galaxy M40 oo loogu talagalay qadka dhexe ee naqshadeynta qaab dhismeedka casriga ah iyo kan casriga ah, kaamirooyin tayo leh iyo taleefoon la awoodi karo oo diiradda saaraya kan ugu yar. Hadda qoyskan Samsung Galaxy M wuxuu ku imaan lahaa taleefano xoog badanSamsung Galaxy M90 ayaa lagu qiyaasey inay soo galaan isla isla sanadkaan 2019 intii lagu jiray rubuc qarnigii la soo dhaafay, in kasta oo illaa iyo hadda aan la xaqiijin taariikhda illaa iyo hadda.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Shiinaha, ayaa jira hadal hayn taleefan leh moodel SM-M905F sida magac gudaha ah oo loogu talagalay astaanta oo la qorsheyn lahaa sannadkan. Tani waa macluumaadkii ugu horreeyay ee taleefankan gacantu laakiin wax walba waxay muujinayaan inay dhowaan xiddig ku yeelan doonto warar xan ah iyo daadisyo waxaanan awoodi doonnaa inaan ogaanno dhammaan astaamaheeda ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin. Samsung Galaxy M90-kan ayaa noqon doona ugu sarreeya tirada qoyska iyo badhtamaha. Waxaana la filayaa inuu la yimaado processor awood badan leh oo ka badan midka loo yaqaan ” Qualcomm Snapdragon 675 ‘oo uu hadda ku fadhiyo Samsung Galaxy M40
Taasi waa sababta wax kasta oo tilmaamaya Samsung Galaxy M90 ay imaan doonaan sannadkaan 2019 iyagoo kudayacaya 700 oo ah processor-ka ‘Snapdragon processor’, sida ay soo ururiyeen asxaabta Movilzona. Processor awood leh oo awood leh ama mid ka socda Exynos, Samsung ayaa iska leh. Ugu yaraan 8 GB oo xusuusta ah iyo ugu yaraan 64 GB oo kayd ah ayaa la filayaa inay ku xigaan chip-ka. Sidoo kale mobilku wuxuu la imaan doonaa gadaal afar dareemayaal iyo batteriga ilaa 4,000 mAh taas oo ka badnaan lahayd maalin ku filan in la isticmaalo iyada oo aan wax dhibaato ah. Sidoo kale, sida lagu sheegayo qiyaasta soo bandhigo leh HD buuxa + xalka oo leh cabir u dhaw 6.5 inji.
Waqtigan xaadirka ah waxaad heli kartaa taleefankaaga Samsung inta lagu jiro saacadihii ugu dambeeyay ee Samsung Fest ee Telefoonka Guriga iyadoo qiima dhimis gaaraya 400 oo yuuro ah laakiin ugu dhakhsaha badan waxaa jiri doona moodello cusub oo buuggaagta ah oo laga dooran karo.